Vibenomics Audio Mgbasa Ozi n'Apụ-N'ụlọ: ahaziri onwe, Egwu dabere na ebe na ozi | Martech Zone
Vibenomics Audio Mgbasa Ozi N'èzí: Ahaziri ahaziri, Egwu dabere na ebe na ozi
Satọde, Febụwarị 24, 2018 Tuzdee, Machị 8, 2022 Douglas Karr
Onye isi oche Prime Car Wash Brent Oakley nwere nsogbu. Ọkwọ ụgbọ ala ọ na-asachapụ nke ọma, ma ka ndị ahịa ya nọ na-eche ụgbọ ala ha, ọ dịghị onye na-etinye ha na ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ ha nwere inye. O mepụtara ikpo okwu ebe ọ nwere ike ịdekọ ozi ahaziri onwe ya, ozi dabere na ọnọdụ na egwu nye ndị ahịa ya.
Mgbe ọ malitere ịkwalite ihe ndozi ihu ikuku site na redio dị na ụlọ ahịa, ọ rere ọtụtụ ndị na-ehichapụ ya n'otu ọnwa karịa ihe ọ ga-ere n'ime afọ ise gara aga. Brent maara na ọ nweghị naanị azịza maka ndị ahịa ya, o nwere usoro ikpo okwu ụlọ ọrụ chọrọ. Yabụ, ọ hapụrụ azụmaahịa ụgbọ ala wee bupụta Vibenomics.
Vibenomics bụ mgbasa ozi Audio Out-of-Home™ dabere na ọnọdụ yana ụlọ ọrụ ahụmịhe nke na-enye ike ọwa ọdịyo maka ndị na-ere ahịa, na-enye ụdị ikike ịgwa ndị na-azụ ahịa okwu ozugbo n'ebe ire ere. Site na teknụzụ ya siri ike nke sitere na igwe ojii, ọba akwụkwọ egwu ndabere nwere ikike, ikike ntinye data, ndị otu ọrụ zuru oke nke ndị ọkachamara ahụmịhe ọdịyo, yana netwọkụ nke talent olu ọkachamara na-achọ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye vibe na-akwalite ego ziri ezi maka ihe karịrị ndị mgbasa ozi 150. karịa ebe 6,000 gafee steeti 49, na-eru ihe karịrị nde mmadụ 210.
Ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na-akwụkarị ụgwọ maka ngwọta egwu nwere ikikere, mana Vibenmoics na-enye egwu na ngwọta ozi nke nwere nloghachi na ntinye ego.
Vibenomics na-enye ndị ọchụnta ego ohere ịnweta ọbá akwụkwọ egwu nwere ikike zuru oke yana ngwa dị mfe iji na-enye ha ohere ịnyefe ma nata ọkwa ahaziri ahazi, nke edekọtara nke ọma n'otu ụbọchị ị rịọrọ ha. Azụmahịa anaghị echegbu onwe ya banyere bandwidth ma ọ bụ okwu teknụzụ - ikpo okwu na-arụ na mbadamba nkume Sprint kwadoro. Naanị tinye ya, ị na-agba ọsọ!
Ebutere site na nkwụnye na-egwu na-agbanwe agbanwe, onye nwe ya, ndị egwuregwu mgbasa ozi na-enyere ndị IoT aka, Vibenomics na-agbasa mgbasa ozi hyper-ezubere iche, na-achọrọ mgbasa ozi na listi ọkpụkpọ ahaziri n'etiti ọnọdụ ọ bụla n'ofe akara ukwu mba ya na-eto ngwa ngwa, na-emeghe ọwa ịzụ ahịa azụmaahịa dị ike. maka iru ndị na-azụ ahịa n'oge nzọụkwụ ikpeazụ dị oke egwu n'okporo ụzọ ịzụta. Site na mmemme mmekọ nke mbụ nke ụdị ya, ndị na-ere ahịa nwere ike ịnata akụkụ nke ego ha nwetara maka mgbasa ozi niile nke Vibenomics na-ere na-egwu n'ime ebe ha, na-enye ha ikike ị nweta ego ikuku ikuku nke onwe ha ma gbanwee ihe nketa ka ọ bụrụ ebe a na-enweta uru ọhụrụ. .
Site na Vibenomics, azụmaahịa nwere ike ịchụpụ nsonaazụ azụmaahịa:
Na-agbanye ngwa ngwa ngwa ngwa ma nwekwuo ikike ịnweta ego maka ndị ahịa ọ bụla.
Kụziri ndị ahịa na ngwaahịa ọhụrụ na onyinye ka ha na-abịa
Mee ndị ahịa gaa na weebụsaịtị gị maka Kupọns na nkwalite.
Ọbụghị naanị na azụmaahịa nwere ike ibipụta ozi nke ha, mana ha nwekwara ike imeghe netwọkụ ha nye ndị mgbasa ozi nke atọ! Lelee ha ngwọta ịmụtakwu banyere ha nwere ike inyere gị ụlọ ọrụ.
Gee ntị na Ajụjụ ọnụ anyị na Brent Rịọ Vibenomics Demo
Tags: ahohmgbasa ozi aoohoziMusicOohooh mgbasa ozimgbasa ozi na-abụghị ụlọnetwọk redioọnụahịa mkpọsaụdịdị
Etu esi etinye Chatbot maka Azụmaahịa Gị